Banaan bax looga soo horjeedo Faroole iyo Mahiga oo ka dhacay Taleex (Daawo Sawirrada) | goboladaradio.com	Thursday, May 23rd, 2013	Home
Banaan bax looga soo horjeedo Faroole iyo Mahiga oo ka dhacay Taleex (Daawo Sawirrada)
Published on August 8, 2012 by admin · 1 Comment Published on August 8, 2012 by Lucky (Gobolada Radio) Banaan baxan oo ka dhacay caasimadda Maamulka khaatumo ee Taleex ayaa looga soo horjeeday Faro Gelinta Madaxwaynaha Maamulka Puntland C/raxmaan Maxamed Maxamuud Faroole uu ku Hayo Deeganadda Khaatumo.
Dadka ku dhaqan Caasimadda Maamulka Khaatumo ee Taleex ayaa banaanbaxooda ku sheegayey in aanay u dul qaadan doonin Faro Gelinta faroole iyo mahiga.
Banaanbaxayaasha ayaa watay boorar ay ku hardhanaayeen No FAROOLE, NO MAHIIGA iyagoona goob fagaare ah ku jeex jeexay Sawiradda Madaxweynaha Puntland C/raxmaan Faroole iyo Ergeyga QM u qaabilsan Soomaaliya Mahiga.
Masuuliyiin Ka mid ah Golaha Wasiiradda iyo Mdaxtooyadda ee Maamulka Khaatumo oo goobta banaanbaxu ka dhacayey kula hadlay shacabka ayaa Faroole iyo Mahiiga uga digay Faro gelinta Maamulka Khaatumo.
Halkan Ka daawo Sawirrada Banaan baxa
mahamad says:	Aug 10, 2012 at 7:28 AM	Wasax wana tager sanahay sawiradoda la jexjixo waliba farole wuxusan ahayen ayu is muday lkn wa lax dhawaqday